Windows၊ MacOS နှင့် Linux အတွက်အကောင်းဆုံး webcam ပရိုဂရမ် ၈ ခု - Emulator.online ▷🥇
စျေးကွက်တွင် Webcam အစီအစဉ်အချို့ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည် PC ကင်မရာကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်၎င်းသည်ကတိက ၀ တ်ကိုမဖြည့်ဆည်းရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများတွင်ပိုမိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်ရှိပြီးရိုက်ကူးထားသောပုံတွင်စစ်ထုတ်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။ နောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ပြသထားသောအရာအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးချယ်စရာများလည်းရှိသည်။
အောက်တွင် Windows, macOS နှင့် Linux အတွက်အကောင်းဆုံး webcam အစီအစဉ် ၈ ခုသည် ထွက်ခွာသည်!
ManyCam သည် video conferencing (သို့) ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သော function များစွာပေးထားသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရေးရန်၊ ဆွဲရန်၊ ဗွီဒီယိုတွင်ပုံများထည့်ရန်၊ ပုံသဏ္includeာန်ပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Webcam ပုံများကိုဖိုင်များ၊ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းကင်မရာများဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည်အရောင်ညှိခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊ opacity ကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ပျော်စရာ filter များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ YouTube, Twitch နှင့် Facebook စသည့်မတူညီသော platform များပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသည်။ အကယ်၍ သင်နှစ်သက်ပါက 720p အထိအခမဲ့ဗားရှင်းနှင့် 4K ကိုပေးချေထားသောဗားရှင်းတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
ဗွီဒီယိုကို MP4, MKV, MOV နှင့် FLV ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောပုံစံများဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
ManyCam (အခမဲ့၊ အပိုပါ ၀ င်သောငွေပေးချေသောအစီအစဉ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ရေစာရှိခြင်းမရှိသော) - Windows 10, 8 and7| macOS 10.11 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
YouCam သည်အလုပ်နှင့်ကစားရန်ကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်၎င်းတွင် Real-time beautification filter များရှိသည်။ ရာပေါင်းများစွာတိုးပွားအဖြစ်မှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြခြင်းမ။
တင်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူမှမှတ်စုများရေးရန်၊ ဗွီဒီယိုကိုပုံများနှင့်ထည့်ရန်၊ အခြားသူများအကြားမျက်နှာပြင်မျှဝေရန်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။ ၎င်းရဲ့ဖော်ရွေသောမျက်နှာပြင်ကသင်အားအဓိကကျသောအင်္ဂါရပ်များကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်သည်။
သင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးချယ်ပါကဗွီဒီယိုသည် Full HD အပါအဝင် AVI, WMV နှင့် MP4 ပုံစံများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပြသနာများတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
YouCam (ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း) - Windows 30, 10 နှင့် 8
Webcam Test သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကင်မရာမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းသင်ကြားပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုထားသောအွန်လိုင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ထဲ ၀ င်ပြီးခလုတ်ကိုသာကြည့်ပါ webcam အမှတ်အသားကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သွားပါ ကျွန်တော့်ကင်မရာကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အကဲဖြတ်မှုသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။
အခြားသူများအကြား resolution၊ bit rate, အရောင်အရေအတွက်၊ brightness, brightness စသည့်အချက်အလက်များကိုသိနိုင်သည်။ အထွေထွေစစ်ဆေးမှုအပြင်သုံးစွဲသူသည် resolution၊ frame rate နှင့် microphone ကဲ့သို့သောပိုမိုတိကျသောရှုထောင့်များကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကူးယူ။ WebM သို့မဟုတ် MKV အဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။
ဝက်ဘ်ကင်မရာစမ်းသပ်မှု (အခမဲ့): ဝဘ်
၀ င်းဒိုးကိုယ်တိုင်ကမူရင်း webcam ပရိုဂရမ်တစ်ခုပေးထားသည်။ Windows Camera သည်ရိုးရှင်းသော်ငြားလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များသာလိုအပ်သောသူများအတွက်။ ချိန်ညှိချက်များတွင် Professional mode ကိုသက်ဝင်စေခြင်းအားဖြင့်အဖြူချိန်ခွင်လျှာနှင့်အလင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
အမြဲတမ်းဘောင်၌နေနိုင်ရန်၊ လျှောက်လွှာတွင်ဇယားကွက်အချို့ရှိသည်။ 360p နှင့် Full HD အကြားနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြားဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲရန် option လည်းရှိသည်။ သို့သော် 30 FPS နှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကို JPEG နှင့် MP4 တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Windows ကင်မရာ (အခမဲ့) - Windows 10
Webcam Toy သည်ပျော်စရာစစ်ထုတ်စက်များကိုရှာဖွေနေသောမည်သူမဆိုအတွက်ဝက်ဘ်ကင်မရာနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ရိုးရှင်းသောအွန်လိုင်း application ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသွားပြီးကိုနှိပ်ပါ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား အပြုံး။ အကယ်၍ Browser မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ထားပါက PC ကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါ။
ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပုံမှန် အားလုံးရရှိနိုင်သက်ရောက်မှု load ရန်။ kaleidoscope၊ ghostly style၊ မီးခိုး၊ ရုပ်ရှင်ဟောင်း၊ ကာတွန်းနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးချယ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရန်ကင်မရာအိုင်ကွန်သို့သွားပါ။
ရလဒ်ကို PC ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ် Twitter, Google Photos သို့မဟုတ် Tumblr တွင်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ကင်မရာအရုပ် (အခမဲ့): ဝဘ်
6. OBS စတူဒီယို
OBS Studio သည် webcam ပရိုဂရမ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲအဓိကဗီဒီယို streaming ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် Twitch၊ Facebook Gaming နှင့် YouTube တို့ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကကင်မရာရုပ်ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး MKV, MP4, TS နဲ့ FLV မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။ resolution သည် 240p မှ 1080p အထိရှိသည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းမှာသင့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေဖို့တည်းဖြတ်တဲ့ကိရိယာအတော်များများလည်းရှိတယ်။ ၎င်းတို့အနက်အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်နောက်ခံ၊ အသံချဲ့စက်ရောစပ်ခြင်း၊ ဆူညံသံလျှော့ချခြင်းနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
OBS လေ့လာမှု (အခမဲ့) - Windows 10 နှင့် 8 | macOS 10.13 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။ | Linux
GoPlay သည်အစပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အခြေခံမှထွက်ခွာလိုသည်။ ပရိုဂရမ်သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရေးရန်နှင့်ဓာတ်ပုံထည့်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ ဗွီဒီယိုများကို 4K အထိ 60fps ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး built-in အယ်ဒီတာတွင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
Application သည်သင်၏ PC မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ အခမဲ့လျှောက်လွှာ၏အခမဲ့ဗားရှင်းသည်ဗီတာမင်ကို ၂ မိနစ်သာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ရလဒ်ကို MOV, AVI, MP2, FLV, GIF သို့မဟုတ် audio တွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ကစားရန်သွားပါ (အခမဲ့, အပြည့်အဝပေးဆောင်ဗားရှင်းနှင့်အတူ): Windows 10, 8 နှင့် 7
၈။ Apowersoft အခမဲ့ Online Screen Recorder
webcam ပုံရိပ်ကိုကြည့်နေစဉ် PC မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သူများအတွက် Apowersoft Free Online Screen Recorder သည်သင့်တော်ပါသည်။ ဒီ site သည်ပုံသဏ္includingာန်များအပါအ ၀ င်လက်ဖြင့်စာရေးခြင်းအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုပေးထားသည်။ အရာအားလုံးသည်အွန်လိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မစတင်ခင်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဒုံးပျံလွှတ်တင် အနည်းငယ် PC မရှိ။
ရလဒ်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ် GIF အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ Cloud သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ် YouTube နှင့် Vimeo တွင်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ resolution ကိုအနိမ့်၊ အလတ်သို့မဟုတ်အမြင့်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Apowersoft အခမဲ့အွန်လိုင်းမျက်နှာပြင် Recorder (အခမဲ့): ဝဘ်
သင်၏ဖုန်းကို ၀ က်ဘ်ကင်မရာအဖြစ်ဝိုင်ဖိုင် (သို့) USB ကြိုးဖြင့်သုံးပါ
သင်၏ PC မျက်နှာပြင်ကိုအခမဲ့မှတ်တမ်းတင်ရန် application များ
အသုံးဝင်သောသူလျှို app များ